Miyuu Eden Hazard ciyaari doonaa kulanka Villarreal ee horyaalka La Liga?? – Gool FM
Miyuu Eden Hazard ciyaari doonaa kulanka Villarreal ee horyaalka La Liga??
(Madrid) 28 Agoosto 2019. Wargeyska “Marca” ee dalka Spin ayaa wuxuu shaaca ka qaaday fursada uu kaga mid noqon karo xiddiga reer Belgiun ee Eden Hazard kulankooda 3-aad horyaalka La Liga ee xili ciyaareedkan, kaasoo ay la ciyaari doonaan Villarreal.
Hazard ayaa dhaawac gumaarka ah kasoo gaaray inta lagu gudi jiray tababarka ay kooxda Real Madrid isugu diyaarineysay kulankii Celta Vigo ay kaga daah furteen horyaalka La Liga xili ciyaareedkan cusub.
Dhakhaatiirta kooxda Real Madrid ayaa sheegtay in Eden Hazard uu garoomada ka maqnanayo mudo dhan saddex isbuuc, si uu kaga soo kabto dhaawacan soo gaaray.
Wargeyskan ayaa wuxuu ku sheegay warbixintiisan in Hazard uu si buuxda uga soo kabsaday dhaawacii uu qabay, balse Zinedine Zidane ma doonayo inuu adeegsado kulanka soo aadan ee Villarreal, maadaama uu ka cabsi qabo inuu halis galiyo, wuxuuna doorbidayaa inuu sugo ilaa iyo kulanka ay la ciyaari doonaan kooxda Levante, kaddib ciyaaraha caalamiga ah.
Hazard wuxuu doonayaa inuu ugu soo laabto garoomada sida ugu dhaqsaha badan, laakiin Zidane wuxuu go’aansaday inuusan adeegsan doonin ilaa iyo 100% uu ka helayo caafimaad buuxa, waxayna u badan in Hazard uu daqiiqado kooban kaga soo muuqan doono xulkiisa qaranka Belgiun, waxaana la filayaa in looga yeeri doono labada kulan ay kula ciyaari doonaan xulalka San Marino iyo Scotland ee isreebreebka koobka Euro 2020.
Halyeeyga reer Brazil ee Rivaldo oo laabta u qaboojiyay taageerayaasha kooxda Real Madrid